Tag: yakabatana chikuva | Martech Zone
Tag: yakabatana chikuva
PartnerStack: Chengetedza Vako Vakabatana, Vatengesi, uye Vashandi
China, Gunyana 24, 2020 Chitatu, Ndira 13, 2021 Douglas Karr
Nyika yedu ndeyedijitari uye yakawanda yeaya hukama nehukama zviri kuitika online kupfuura nakare kose. Kunyangwe echinyakare makambani ari kufambisa kutengesa kwavo, sevhisi, uye kubatanidzwa pamhepo… ichokwadi chitsva chakajairika kubvira denda uye kukiyiwa. Kushambadzira-kwemuromo-chinhu chakakosha bhizinesi rega rega. Patsika nemagariro, avo vanotumirwa vanogona kunge vasingashandi ... vachipfuura nhamba yefoni kana email kero yewaunoshanda naye uye kumirira kuti foni iridze.
Impact Radius: Partner, Affiliate, Media uye Tag Management
Muvhuro, July 21, 2014 Douglas Karr
Impact Radius inogonesa edhijitari mabhenefiti uye maajisheni kukwidziridza kudzoka kwekushambadzira kushandisa munzira dzedigital, nhare uye isipo. SaaS yavo yekushambadzira tekinoroji inogonesa vashambadziri kuve nehumwe analytics maonero mune ese ekushambadzira kuedza nekutora granular yevatengi rwendo data uye kushambadzira mutengo. Iyo Impact Radius Suite yezvigadzirwa inosanganisira Partner Manager - gadzirisa yako yakabatana uye zvine hungwaru zvirongwa zvewaunofambidzana. Deredza mari yako yekutengesa uye wedzera ROI uchisimudzira kusagadzikana, ongororo dzekunzwisisa, uye